Shiinaha Dhirta Gacmeedyada Dhirta dhoobada Gacmeed 6 × 6 warshad iyo soosaarayaasha | YANJIN
Cabir: 6x6inch (15.2x15.2cm)
Miisaanka: 0.31kg / pc
MOQ: 480pcs / naqshad
Xirmo: 10pcs / sanduuqa xumbada, 120pcs / kartoon
Miisaanka Hal Kartoon: 39.6kg
Cabbirka kartoonka: 64x38x39cm
Darbiyadayada darbiyada iyadoo la adeegsanayo habka dhoobada iyo shaqada naqshadeynta ee laga keenay Shiinaha ee hidaha iyo dhaqanka, marmarka dhoobada dhalaalaya ayaa loo qaabeeyey shaqooyin farshaxan oo habeysan.
Foornooyinka derbiga ayaa hadda si ballaaran loogu isticmaalaa meelo badan, sida dabka, musqusha, jikada, barkadda dabaasha iyo qolka fadhiga. Iyagu waa qurxin farshaxan oo ku habboon gurigaaga iyo xafiiskaaga.
Sababtoo ah gacantooda rinji dabiici ah, maahan wax aan caadi ahayn in laga helo cilladaha mararka qaarkood, dildilaaca, ama kala duwanaanshaha hooska ee ku dhex jira lebenka. Kala duwanaanshahan waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay muuqaal la doonayo badeecada.
Ku darista soo jiidashada iyo xarrago jikada, qubayska, qubayska, miisaska miisaska leh doolshe gacanta lagu sameeyay, qurxiso noloshaada.
Kuwa doonaya raadinta gaarka ah ee Guryahooda ama Ganacsigooda, iyo kuwa qadarinta u leh hal-abuurka iyo faahfaahinta wanaagsan ee kaliya xirfadle Tile Artist ayaa bixin kara, waxay la kulmi doonaan qanacsanaan iyo raynrayn aan la qiyaasi karin oo kaliya gacmo-gacmeed gacmeed caadadiisu tahay oo keliya ay bixin karto.
(1) Naqshad kala duwan oo leben gacmeed lagu sameeyo, sida dalka, koonfur-galbeed, classical, romantic, Fiktooriya, oceanic, xayawaannada, shimbiraha, ubaxyada, geedaha, iwm. Waxaan sidoo kale sameyn karnaa oo aan qaabeyn karnaa iyadoo loo eegayo sawirkaaga iyo codsigaaga.
(2) Dhammaan gacmaha ay rinjiyeeyaan shaqaalaheena xirfadleyda ah.
(3) Midab iyo naqshad kala duwan, astaamo qurux badan oo ka hortagga wasakhda.
(4) Isticmaal: Ku habboon sharraxaad kasta oo gudaha ka mid ah oo noocyo badan leh. Muuji shakhsiyadda.
(5) dhumucdiisuna: 7-8mm
(6) fududahay in la dhaqo oo la ilaaliyo
(7) Lagu shiday heerkul sare
(8) Maaddada wax lagu sawiro ee deegaanka u habboon
2) Shuruudaha Bixinta: 30-100% dhigaalka, TT, West Union, L / C
5) Taariikhda Bixinta: 20-35days ka dib markii la xaqiijiyo amarka.
Waxaa laga yaabaa inaan nashqadeynno tixraacaaga.
Qaar ka mid ah qaababka dusiyeyaasha ka muuqda sawirka ayaa laga yaabaa inay beddelaan, wareegga saamiga awgiis.
Haddii aad raadineyso qaab gaar ah ama midab adag oo midab leh, fadlan nala soo xiriir.
Hore: Naqshad Caan ah oo loogu talagalay Gargaarka Sare ee Fududyada dhoobada - Qaboojiyaha Qaboojiyaha - Yanjin
Xiga: Xudduudda dhoobada Qurxinta Ceramic
Lambarada Dhismaha Qurxinta Gacanta ee Gacanta Lagu Sameeyay Qurxinta
Shandada Darbiga Dhoobada Gacanta Lagu Sameeyo